Fitaovana fametahana herinaratra marolafy - China Multifunctional Power Meter Manufacturer, mpamatsy
Modely fanaraha-maso angovo manan-tsaina EngyBrick
EngyBrick System dia momba ny vahaolana maodely fanaparitahana herinaratra, izay natokana hanampiana ny mpanjifa hanatsara ny fahombiazan'ny fiasan'izy ireo ary hampihena be ny teti-bolan'ny fividianana fananana sy ny vidin'ny fametrahana, manome ny mpampiasa ny maody fametrahana tsara indrindra sy ny fomba komisiona mitahiry fotoana tsara indrindra. Ny rafitra dia misy ny fividianana mari-pamantarana fifandraisana & fanaraha-maso ny herinaratra, fanaraha-maso roa ankehitriny. Ny rafitra dia mampiasa maodely fitaterana herinaratra tsy miankina bus, seranan-tsambo RJ45 mifandray amin'ireo maody singa tsirairay. Ny komisiona misy azy dia mandray maodely tokana ho an'ny fikirakirana adiresy ao an-tsaha. Izy io koa dia afaka manamboatra ny masontsivana sy ny maody miasa amin'ny alàlan'ny efijery fampisehoana.
PMC200 Power Parameter Tester dia be mpampiasa amin'ny rafitra fitantanana angovo, mandeha ho azy ny automation, automation ny fizarana network, fizarana herinaratra distrika, automatique indostrialy, tranobe manan-tsaina, switchboard manan-tsaina, kabinetra switch, sns. fitaovana nentin-drazana toy ny transducer habetsahan'ny herinaratra, fitaovana fampirantiana tarehimarika, singa ahazoana angon-drakitra ary mpandinika firaketana, sns. Ny tanjona marobe dia mampihena ny vidiny, ary ny fifandraisana misy tariby tsotra dia manamora ny fitsapana.
Fitsapana fampitàna lavitra, Fitsapana fampitàna an-tsokosoko, Fitsapana fampitana mivantana, Fitsapana fampitana, Fiarovana Relay Tester, Fitsapana fampitana niomerika, Vokatra rehetra